Imixholo eyahlukileyo yeNcwadi yeSikolo ePhakamileyo - Ulutsha Nesikolo
Imixholo eyahlukileyo yeNcwadi yeSikolo ePhakamileyo
Umxholo wencwadi yonyaka oyikisayo ngoyena uya konwaba oontanga bakho xa befumana iincwadi zabo zonyaka kwaye bakhunjulwe ngothando kwiminyaka ezayo. Ngokwesiqhelo, umxholo wencwadi ukhethwa ekuqaleni konyaka wesikolo. Kuba incwadi yonyaka ngokwesiko yayiqulathe ababhali abanqwenela ukuba ngababhali, iintatheli, abafoti, kunye nabazobi bemizobo, ubuchule bokwenza izinto bunokuxhaphaka kwezi ntlanganiso. Yiza uzilungiselele ngombono wencwadi efanelekileyo yonyaka ofuna ukuyenza.
15 Iingcamango zeMixholo yeNcwadi Yonyaka
Yenza uyilo kwaye udlale ngezi zimvo. Ezi ngcebiso sisiqalo nje sento onokuyiphumeza xa ufuna ukwenza incwadi yonyaka yoqobo. Gcina ukhumbula, incwadi yonyaka kufuneka ihlale ibandakanya. Ungaze uyile neqela elithile engqondweni. Ufuna ekugqibeleni wenze incwadi yememori lonke iklasi iya kuyonwabela ngokudibeneyo.
Uluvo lwexesha ngumxholo ophikisanayo kodwa uhlala uhambelana nencwadi yonyaka wesikolo esiphakamileyo. Unokukhetha ukubeka imifanekiso eyahlukeneyo, iifoto kunye nemizobo yendlela ogcina ngayo ixesha kumaphepha kwincwadi yonke. Unokukhetha ukusebenzisa iindlela ezahlukeneyo ukumela icandelo ngalinye. Iglasi yeyure inokumelaiklasi ephezuluNgelixa iwotshi yealam inokuba ilungele ngakumbi abatsha. Khetha ifonti entle onokuyibekakuchaphulo olumalunga nexesha kunye namazwi kwiingoma ezibhekisa ixesha kuyo yonke incwadi, nazo.
Inkcubeko yePop Passion
Kukho isizathu sokuba amakhadi 'oNyaka wokuzalwa' kunye neevidiyo zithandwa kakhulu ekunikezeleni ngeentsuku zokuzalwa. Abantu bayathanda ukuphononongainkcubeko yepopeyayinxulunyaniswa nendawo ethile kunye nexesha elibalulekileyo kubo. Ngelixa ulutsha luza kuthanda ukubona izingqinisiso kwizinto ezithandwayo kunyaka abaphumelele kuwo, iya kuba nesibonelelo esongeziweyo sokuba neminyaka eyakhayo ukususela ngoku, nayo. Unokuthatha oku kwicala lokwenza amaphepha afana nolwakhiwo lweewebhusayithi ezaziwayo ezentlalo. Ungafaka uluhlu kuyo yonke incwadi yonyaka ye-10 ephezulu kwiimuvi, kumculo nakumabonwakude. Xa kunokwenzeka, gcina ugxininiso kwimicimbi enxulumene nolutsha kwinkcubeko ye pop.
Nanku umxholo onokuthi udlale ngawo kuba kukho uphawu olucacileyo 'lwemibala eyinyani' yeyona nto iphambili koontanga bakho. Kananjalo iyakwenza ukuba ukwazi ukuyila imibala yesikolo sakho kuyo yonke incwadi. Iifoto zenqanaba kwaye uthathe ezendalo kwiminyhadala unyaka wonke wabafundi abanxibe imibala yesikolo ngokuzingca. Kuxhomekeka kumboneleli wencwadi yonyaka, unokutshintsha amaphepha angasemva kwimibala yesikolo. Ungabhala umgca okanye emibini ehambelana nendlela imibala yokwenyani yomntu kunye neklasi njengeqela enokukhazimla kunye ukuqhuba umxholo ekhaya.
Ukukhetha kunye neendlela ezinqumlayo
Bhiyozela ukhetho olungenamda kwiminyaka yeshumi elivisayo ngencwadi yonyaka egxininisa uninzi lweendlela ezinqamlezayo zolutsha. Zisa lo mxholo ebomini ngeendlela ezininzi ozithandayo ngaphakathi kwincwadi. Ungamxinwa 'kwindlela engahambanga kangako' ngokubhekisa kuRobert Frost Umbongo kwaye ungenise uphawu lomntu ngamnye, naye. Kwelinye icala, ungaya kwicala lokuyigcina ngokubanzi kwaye ukhethe ubugcisa obubonisa iintlobo ezahlukeneyo zeendlela ezinqumlayo kunye nemiboniso ebonakalayo yokhetho ulutsha olujongene nalo. Gxininisa umyalezo wokuba ikamva livulekile, kwaye ungathatha nayiphi na indlela oyikhethayo.
ingaba izinja ziyafa zilele
Ewe, Sihamba Ndawonye Ingoma ye iconic evela kumculo wokugqibela wolutsha, Thambisa . Umxholo ngokwawo ungahamba ngeendlela ezininzi zokubandakanya kunye nokuba zininzi kangakanani iintlobo zolutsha ezingena kunye kwiklasi enye. Unokukhetha ukufaka amazwi engoma kunye nezinye iingcaphuno zamaqela kunye nokudibana. Phinda wenze imifanekiso ukusuka esiphelweni sefilimu kunye neklasi ephezulu yokuhamba ngengalo. Sebenzisa ithuba lokususa iintsomi kunye nolutsha ngokubandakanya iifoto zabahlobo abanomdla ohluke kakhulu. Udliwanondlebe nabafundi, kwaye ubandakanye iikowuti ezinkulu abazinikayo malunga nomanyano nobunye. Isigaba sokudubula njengelinye lamalungu ebhendi, ii-cheerleader, iintshatsheli zemfundo, kunye neenkwenkwezi zemidlalo zonke zixhomekeke
Amagorha Phakathi Kwethu
Lo ngumxholo wencwadi yonyaka ophakamisa kakhulu kuba uzisa ingqalelo kwabo basebenzela ukwenza umhlaba ube yindawo engcono kunye nabo boyise iingxaki ezingakholelekiyo zokufezekisa izinto ezilungileyo. Usenokwenza udliwanondlebe nabafundi abenza umsebenzi wokuzithandela eluntwini, abo bajongane nezigulo, kunye nolutsha olusebenze nzima ukoyisa imiqobo yokuba kumaqela ezemidlalo okanye ukufikelela kwinqanaba lokufunda ebelinzima kubo. Unokukhetha ukufaka amaqhawe kulutsha ukuze alingise kubantu abadala basekuhlaleni, nabo. Ungabandakanya ii-stills ezivela kwiimuvi ezimalunga namagorha, ucaphule amaqhawe, kwaye ubhiyozele ootitshala abangamagorha kubafundi.
indlela yokufumana amabala amhlophe kwiingubo ezimnyama
Umxholo wenyani uyibonisile ukuba ilungele ukuphamba, kwaye le mxholo uyayenza loo nto. Yenza incwadi yonyaka ibonakale njengomboniso wokwenyani apho umfundi ngamnye eyinkwenkwezi. Yigcine iklasi, nangona kunjalo, kwaye unganikeli imbeko kwimiboniso enokuchazwa njengokuhlekisa ngamaqela oontanga bakho. Izalathiso ezivela kwimiboniso efana Usindileyo , Ukudanisa neenkwenkwezi , kunye Idol yaseMelika zinokulukwa ngokulula kwincwadi yonyaka kuba ziyahambelana ngokulula neziganeko ezenziwa lulutsha kuwo wonke unyaka wesikolo. Qiniseka ukuba ukhulisa ezo zithandwa ngokukodwa ngeli xesha lesikolo ukuze uzigcine ngexesha. Unokufuna ukunqanda iikowuti ezingenazo izinto ezininzi, kodwa unokubandakanya ezikhuthazayo kuyo yonke incwadi yonyaka.
Umdaniso woMdaniso woMdaniso
Ayinguye wonke umntu ongumdanisi, kodwa ukudanisa ngobomi sisifaniso bonke abantwana abakwaziyo ukunxibelelana ngandlela thile. Unokukhetha ukubeka ngokwahlukileyoIingoma zomculo ezijongana nomdanisokwiingoma ezinje, Ndiyathemba ukuba Uyadanisa , Ukudanisa noBomi , kunye Danisa Ubuhlungu bam . Umxholo wencwadi yonyaka uyonwabisa kakhulu, nawo, kuba uyakuvumela ukuba uzise ukugxila kwimidaniso eyahlukeneyo isikolo sakho esinayo unyaka wonke. Ubugcisa kunye nemifanekiso yomdaniso inokudityaniswa kunye nemiyalezo yokwenza okuninzi ebomini.
Kule minyaka ibhiyozela ubuhle obuqhubeka nokukhula ngokuhamba kwexesha kunye nendlela umntu owoyikeka ngayo unyaka nonyaka. Dlala ngalo mxholo ukubandakanya isalathiso sonyaka ngamnye wobomi babafundi ngokubandakanya imifanekiso edlulileyo yoontanga abavela kwisikolo samabanga aphantsi naphakathi kunye nemifanekiso yosuku lwangoku. Kwakhona, fumana iifoto ezimele yonke iminyaka elishumi isikolo sakho siqhuba, ukuba kunokwenzeka. Ukujonga ixesha elidlulileyo kunokuzisa okukhoyo ngoku nakwixesha elizayo ngokucacileyo. Iinyani ezibalulekileyo malunga neminyaka eli-18 edlulileyo kwincwadi yonyaka, nayo, ukwenzela ukubhiyozela ubomi beklasi ephezulu. Ungahamba ngeendlela ezininzi ngalo mxholo, ke qiniseka ukuba uyigcine kugxile kumanqaku ofuna ukuwenza ukunqanda ukuya kumkhombandlela omninzi ngaxeshanye. Unokukhetha ukudlala i-nostalgia, nayo, ngobugcisa obuhle obuhlonipha amashumi eminyaka edlulileyo.
Ubomi buyenzeka ngeXesha
Umbongo we-Wax malunga nexesha elikhulu nelincinci elenze ukuba unyaka wesikolo odlulileyo ubaluleke kakhulu ngalo mxholo wokuzonwabisa. Ayikuvumeli kuphela ukuba ugxile kwiziganeko ezikhulu ezenzekileyo ngexesha lonyaka wesikolo, kodwa unganikezela ngamaphepha ambalwa ukubuyela kwimpumlo yexesha elidlulileyo labo ufunda nabo. Khawulezisa amaxesha anokungahoywa. Ewe, umzuzu xa ukumkanikazi oza ekhaya ethweswe isithsaba kufanele ukuba ubandakanywe kulo lonke uzuko olulindelweyo, kodwa ufuna ukunika abo bangaphantsi kwezemidlalo ithuba lokuqaqamba kunyaka. Thatha ixesha elinomdla kubomi babafundi ngazo zonke iindlela ngeendlela ngokubuza ulutsha ukuba yintoni eyona inomdla ebomini babo. Faka iifoto ezivela kwiminyhadala ngaphakathi nangaphandle kwesikolo ukuba kunokwenzeka. Ukuluka isicatshulwa ngokwenza umzuzu ngamnye ukubala kunye nomxholo ofanayo ngokujolise ekuhlaleni okwangoku.
Ukuhlekisa ngeenxa zonke
Isikolo samabanga aphakamileyo sinokuba sesinzulu, ke ukuba nencwadi yonyaka ehlekisayo kunokubavuyisa ngokwenene abafundi. Faka iikhathuni okanye imifanekiso eqingqiweyo kunyaka wonke ukugcina ukukhanya kwentliziyo kulomxholo ubonakala kwasekuqalekeniisiciko.Unokukhetha ukunciphisa uhlobo oluthile lobugcisa behlaya ukubonisa kuyo yonke le ncwadi, okanye uyixube kunye neekhathuni ezininzi. Ungabandakanyi naluphi na uhlobo lwentsingiselo yomoya okanye uburharha babantu abadala. Gcina ugxininiso kucoceko, olunxulumene nolutsha kunye nokuhlekisa okunxulumene nesikolo. Beka iziqhulo kwiindawo ezizodwa kwincwadi yonyaka. Faka iifoto eziphambili zabafundi abahlekayo kunye nokonwaba. Le yincwadi eyilelwe ngokukodwa ukunceda abafundi ukuba babe nexesha elihle benencasa elungileyo kwaye benenjongo ezintle.
Sebenzisa lo mxholo kuyo yonke incwadi yonyaka ukubuyisela ukugxila kulowo uwufumanayo. Oku kubaluleke kakhulu ukubhiyozela umfundi ngamnye. Zama ukuqinisekisa ukuba bonke abafundi bamelwe ngokulinganayo kwiifoto kuyo yonke incwadi, ukuze wonke umntu azifumane. Faka isalathiso ngasemva sokufumana ngokulula umfundi ngamnye; oko kukunceda ngokulula ngakumbi ukulandelela ukuba umfundi ngamnye uvela kangaphi encwadini. Nokuba isikolo esiphakamileyo ngulo mzuzu xa umntu ephakama okanye ixesha elibuhlungu, kukho uvuyo olukhulu kunye nosizi wonke umntu ahamba kulo. Khuthaza abanini beencwadi zonyaka ukuba bazenzele incwadi yabo yonyaka ngaphaya kokufumana iisiginitsha ezivela kubahlobo ngokunikezela ngencwadi yokupapashwa kwincwadi yonke. Unokukhetha ukuya kwicala lokubhiyozela abantu abamatsha ukubetha igubu labo ngemifanekiso yegubu kunye nezalathiso.
Ukuba kukho into enye ulutsha oluninzi olwela ixesha elingakumbi ukuyenza, kukudlala imidlalo yevidiyo. Khetha lo mxholo wencwadi edlalayo ehlawula imbeko kwimidlalo yevidiyo eyaziwayo kulo nyaka. Ungayithatha le ndlela ujonge kwisikweko sokudlala ukuphumelela ebomini. Yintoni eyahlukileyo phakathi kokubetha umdlalo wevidiyo kunye nemibuzo yovavanyo engekhoyo? Ewe, ngaphandle kwento yokuba umntu unokuchaphazela inqanaba kunye ne-ricochet kwezinye izinto zobomi. Uyilo lunokwaziswa ngemifanekiso kunye nezikrini zemidlalo yevidiyo eyaziwayo, kwaye ungasebenzisa isigama somdlalo wevidiyo kwisicatshulwa sonke xa uzobe kwisikweko sokudlala umdlalo kunye nokulwa indlela yakho kwiminyaka yeshumi elivisayo.
Ukutshintsha kwamaxesha sisikweko esihle seenguqulelo ezininzi kulutsha olufikayo, ukusuka kunyaka wabo omtsha ukuya kuthi ga xa bebadala balawula isikolo. Ungasebenzisa imibala emihle, eyahlukileyo ukwahlula amaxesha onyaka. Bandakanya amacandelo ehlobo, ekwindla, ebusika, nasentwasahlobo enombhalo ofanayo kunye neefoto ezichaza olona hambo lonyaka ukuya esikolweni kunye nokufanekisa ngokufaka utshintsho oluninzi unyaka wonke kunye nobomi ulutsha olujamelana nalo rhoqo. Unokukhetha ukufaka umbongo wexesha ngalinye lonyaka okanye izicatshulwa ezincwadini ezikhethekileyo zonyaka ngamnye. Khuthaza ngento oyibhalayo ngotshintsho. Nangona inokoyikisa, utshintsho lunokuba lunomdla kakhulu.
Ilungele ukuSondela kwakho
Khetha incwadi yonyaka enomxholo bhanyabhanya ukuze wenze abafundi bancume. Uninzi lolutsha luyakuthanda ukuchitha ixesha kwi-cinema, kwaye kukho iindlela ezingapheliyo zokuyithatha. Ukusuka ekwenzeni ifoto yeklasi kwindawo yemidlalo yeqonga ukuya kuthabatha imifanekiso nganye kwikhaphethi ebomvu, zininzi iindlela zokwenza imifanekiso kuyo yonke le ncwadi ilingane nomxholo ngeendlela ezichuliweyo nezingacacanga. Unokukhetha ukwahlula-hlula kwincwadi yonyaka ukuze ubeke imbeko kwimiboniso bhanyabhanya yolutsha. Isikhuselo sinokwenziwa ukulingisa ipowusta eyaziwayo yeemovie. Bandakanya ii-movie ezikhuthazayo, ezihlekisayo kunye nexesha elifanelekileyo. Vumela amacandelo kwincwadi yonyaka yabaselula ukuba babeke eyabo itikiti lokudlala itikiti lomdlalo bhanyabhanya kunye noluhlu lwezinto abazithandayo abazibonileyo kunyaka abaphumelele kuwo.
Iingcebiso zokuPhucula iiNqaku zeNqaku leMixholo yeeNcwadi zeSikolo samabanga aphakamileyo
Ukukhetha izimvo zemixholo yencwadi yakho yonyaka sisiqalo nje seprojekthi eyonwabisayo nenomdla. Kuya kuthatha unyaka kunye nabasebenzi babafundi ukuba benze ubugcisa kunye nokugqibezela le ncwadi ibalulekileyo. Ngelixa uphuhlisa izimvo zakho, gcina ezi zinto engqondweni.
Soloko unika ikhredithi efanelekileyo kumntu ocebisa umbono oza kuwukhetha ekugqibeleni. Oko kuthetha ukubabulela ekuhleni kwiintlanganiso kunye nokubeka amagama abo kwincwadi yonyaka ngombulelo.
Cela igalelo kubafundi, nokuba abekho kubasebenzi bencwadi yonyaka. Kububulumko ukwamkela ukuba iingcinga ezinkulu zinokuvela naphina, kwaye ukufumana ingxelo yoyilo evela kwabanye abafundi kunokunceda ukuqhubela phambili umxholo olula kubugcisa, obonwabisayo.
Xa ukhetha umxholo, kubalulekile ukuhlala ungaphelelwa lixesha. Ngelixa izimvo zenkcubeko ye-pop zinokwenza imimangaliso, kukwabubulumko ukukhetha umxholo ongazukuphazamiseka kwiminyaka elishumi yokuhlangana kwakho. Abantu bazigcina iincwadi zabo zonyaka ubomi babo bonke.
Khetha izitayile zakudala ezithi zivelise ubuqaqawuli besikolo sakho ngaphandle kokuxhomekeka kakhulu kwiindlela kunye neendlela zangoku zokucinga. Ufuna ukuba incwadi yakho yonyaka ibe yincwadi yeenkumbulo- hayi umzuzu onqabileyo okothusayo ngexesha.
Emva kokuba umxholo wakho omnandi ukhethiwe, emva koko ulonwabo lokwenene luqala. Khumbula ukuva izimvo kunye neengcebiso zabo bonke ababandakanyekayo ekudalweni kwayo, kwaye uyakuqinisekisa unyaka ogcwele ulonwabo kunye neenkumbulo ezintle.
Yonwaba ngomxholo weNcwadi Yonyaka
Ngelixa unoxanduva olukhulu kuwo wonke umzimba womfundi wakho xa usenza uhlobo lwencwadi yonyaka efanelekileyo, gcinani engqondweni ukuba isizathu sokuba ubekwincwadi yonyaka kwindawo yokuqala kungenzeka ukuba ayinanto yakwenza noxinzelelo malunga nexesha elibekiweyo. Gcina imvakalelo yolonwabo kuyo yonke inkqubo kwaye ukhumbule ukonwabela uhambo. Ukusebenza kwincwadi yonyaka lilungelo, kwaye kuya kufuneka ulonwabele uhambo.
Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Iimpawu Nophawu Lomntu Ezantsi Carb Gourmet Food Ukuhamba Deals Ezothando
amagama abantwana amantombazana aqala ngo-s
njani ukuthandana nomntu
yintoni umntu oyintombi ayithandayo emfazini
indlela yokuhlonipha umntu obhubhileyo ngomhla wabo wokuzalwa